JIRAMA MAHAJANGA : Efa tonga ny ampahan’ny solika na dia mbola tsy maharaka ny filàna aza
Efa tonga ny ampahan’ny solika ilaina hamatsy ny Jirama eto Mahajanga. 9 janvier 2019
Mbola tsy maharaka ny filana rehetra anefa izy io fa ny ampahany ihany ka noho izany dia mitohy ny fahatapahan-jiro mihodina na ‘delestage tournante’ na dia efa mihena aza ny ora aharetan’ny fahatapahana. 76% ny filana amin’ny antoandro no afaka fenoin’izy ireo. 24% ny fahatapahana sisa amin’ny antoandro ary 48% kosa amin’ny alina.
Mbola tsy fantatra ny hahafoana ny delestage ary tsy ny eto Mahajanga irery ihany fa i Madaga-sikara manontolo no tratr’izao fahatapahana izao. Mitaraina noho izany reo mpanjifan’ny Jirama rehetra manomboka amin’ny mpianatra, ny renim-pianakaviana hatramin’ireo mpampiasa herinaratra rehetra.
Ny ankizy tsy afaka mianatra lesona sy manao entimody amin’ny hariva, ny mpampiasa herinaratra kosa tsy afaka miasa manao ny velon-tenan’izy ireo araka ny tokony ho izy.